Apple waxay horey u iibisay Sony PlayStation DualSense Wireless Controller ee PS5 websaydhkeeda | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay horey u iibisay Sony PlayStation DualSense Wireless Controller ee PS5 boggeeda internetka
Waa wax lagu qoslo in halka malaayiin isticmaale ay isku dayayaan inay iibsadaan Maamulaha Sony PlayStation 4 mana noqon karo keyd la'aan awgeed, Apple horeyba waxay ugu haysatay bakhaarkeeda xakamaynta Sony PlayStation 5 qalabka Apple.
Ka dib markii si rasmi ah loo shaaciyey in xakameyntan qalabka loo yaqaan 'console console' uu la socon doono Paty ble qalabka Apple oo ay ku jiraan Mac, iPhone, iPad, Apple TV, iwm. Shirkadda Cupertino waxay horeyba u leedahay buuggeeda wax soo saar ee shabakadda Mareykanka xakamaynta this Sony PlayStation DualSense Wireless maamusha iyo keyd la geeyo isla maalintaas.
Isticmaalayaasha doonaya waxay hadda ka heli karaan xakamaynta PlayStation in loogu isticmaalo aaladaha Apple, sidaan kor ku soo sheegnay oo keliya dadka isticmaala ee deggan Mareykanka maaddaama aan laga heli karin websaydhka waddankeenna xilligan. Qiimaha dukaanka Apple waa $ 69,95 loogu talagalay 'Dualsense', qiimo u dhigma waxa aan ka heli karno dukaamada.
Ciyaaraha lagu ciyaaro Mac-gaaga ama iPad-ka oo leh kontorool la mid ah midka Sony PlayStation runti way u fiicnaan kartaa kuwa saacado badan qaata, laakiin runtii waa halka kontorooladaan looga faa'iideysto waa qunsuliyadaha laftooda ee ma ahan ciyaaraha ka yimid Apple tan iyo sidii aan wada ognahay ciyaaruhu maaha xoog shirkadda Cupertino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » Apple waxay horey u iibisay Sony PlayStation DualSense Wireless Controller ee PS5 boggeeda internetka
Chips M1X ayaa lagu dhex dari doonaa barnaamijka cusub ee 'MacBook Pro'